Madaxweyne Xassan oo Xildhibaanadda Baarlamanka codsi iyo canaanba u jeediyey, sheegeyna……… |
Madaxweyne Xassan oo Xildhibaanadda Baarlamanka codsi iyo canaanba u jeediyey, sheegeyna………
buy Kamagra Jelly online, clomid without prescription. Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya, oo ka hor hadlay xildhibaanada baarlamaanka Isniintii shalay ayaa ugu baaqay inay joojiyaan mooshinada xil ka qaadista ee ay la dabataagan yihiin madaxda dawlada kuwaasoo buuq iyo qalqal ka dhex abuura dawlada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku tilmaamay “fashilka ugu weyn ee ummad soo foodsaara inay tahay cabsi”, wuxuuna intaa ku daray in Al Shabaab ay dadka ugu hanjabaan dil iyo qoorgoyn, maxkamaduhuna ku hanjabaan xarig halka baarlamaanka uu masuuliyiinta dawlada ugu goodiyaan mooshin.
“Aaan iska deyno dhaqanka noocaas ah oo aa waqtiga yar ee noo haray u jiheyno sidii aan u qaban lahayn hawlaha nalaga rabo,” ayuu yiri madaxweynaha oo la hadlayey xildhibaanada.
Wuxuu sheegay in mooshinada ay yihiin caqabad weyn oo dib u dhac ku rida in dawladu ay gudato waajibkeeda, maadaama mashuul badan lagu furo madaxda marka uu mooshin ka yaallo.
Sidoo kale Madaxweynaha wuxuu ku dhaliilay xildhibaanada qaarkood in marka ay isqabtaan madaxda sare inay u dacwoodaan ajnabiga, sida uu sheegay oo ay saraakiil iyo wadamo shisheeye oo ay u sheegtaan dacwadaha iyo arrimaha ka dhexeeya dadka Soomaalida.
“Aan dhegaha dadkeena ku shubno war wanaagsan, ajnabi ukala orodka iyo waxa anaga dhexdeena inaan u sheegano dad ajnabi ah nooma keeneyso xal,” ayuu sii raaciyey madaxweynaha.
Khudbadan uu Xasan Sheekh ka jeediyey golaha baarlamaanka ayaa timid xilli uu jiray mooshin ay wadeen xildhibaan ku kacsan madaxweynaha iyo wasiirada xukuumada qaarkood kuwaasoo ku shira hoteelada magaalada Muqdisho.